मधेसको देश चिन्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
मधेसले संविधानको सामथ्र्यलाई ओझेल पारेर मात्र हेर्नु वा मधेसमा रहेको संविधानप्रति संशयमा आँखा चिम्लिनु समानान्तर रेखामा हिंँड्नु हो ।
श्रावण ३१, २०७५ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सवालमा मधेसले किन बोल्ने ? राष्ट्रिय सवालमा मधेस किन बोल्दैन ? समान जस्ता लाग्ने यी दुई प्रश्नभित्र दुई मनोविज्ञान छन् । पहिलो प्रश्न गर्ने समूहको सोच अनुसार राष्ट्रिय सरोकार भनिएका विषयमा चिन्ता र चासो राखेर के हुने हो ?
गंगामाया अधिकारीको अनशनबाट राज्यद्वारा हत्या गरिएका निर्दोष मधेसीका परिवारले न्याय पाउने होइनन्, डा. गोविन्द केसीको अडानले स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार गरे पनि औपनिवेशिक सत्तामा बाँचेका मधेसीले आखिर के लाभ पाउने हुन् ? अदालत भित्रको द्वन्द्व होस् वा सेनाको बढ्दो व्यापार मोहप्रति मधेसीले किन चासो राख्ने ? मधेसमा सुरक्षा व्यवस्थापनको निहुँमा इन्काउन्टर भइराख्दा कतै खैलाबैला भएन, अहिले त्यो सवाल ठूलो स्वरमा सुनिँंदैछ, किन ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरूले भन्छन्, जुन ‘राष्ट्रिय’ भन्ने सवालले काठमाडांैको मथिङ्गल हल्लाइरहेका हुन्छन्, त्यसबारे मधेस निस्फिक्री हुन्छन् ।
दोस्रो प्रश्न गर्नेहरूको सरोकार छ, मुलुक भित्रका महत्त्वपूर्ण विमर्शमा मधेसले किन सहभागिता देखाउँदैन ? यस्तो समूहको तर्क हुन्छ, अदालतको जवाफदेहिता, सेनाको व्यावसायिकता, संसद्को प्रभावकारिता, निर्वाचित कार्यकारीको भूमिका, शक्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, असहमतिको अधिकार, बढ्दो कर्पोरेटीकरण, समृद्धिको नाममा लुट, प्रतिपक्षको स्पेसजस्ता विषयहरूप्रति मधेसको कोणबाट किन विमर्श हुँदैन ?
मधेस यस्ता विषयप्रति किन आफूलाई अलग–थलग राख्छ ? मधेसले आत्मकेन्द्रित हुनुभन्दा बरु देशकेन्द्रित हुनुपर्ने होइन ? मधेसले केही माग गरिराख्दा उसले अर्को भूगोलको पनि सही सूचना राख्नुपर्ने हैन ? मधेसले अर्को भूगोलबारे ऐक्यबद्धता देखाउँदा उसको सरोकारमा सहमति देखाउनेहरूको सङ्ख्या थपिन्छ । विभाजनको रेखा कोरेर नक्कली अवधारणाका आधारमा खेतीपाती गर्नेहरू समाप्त हुन्छन् । तर खै मधेस आफैंमा अलमल र अस्पष्ट छ ।
दुइटै खाले प्रश्न उठाउनेहरू पूर्णत: तथ्यहीन छैनन् । तर यी तथ्य आफैंमा निरपेक्ष सत्य होइन । एउटा व्यक्तिको आँखाले जहाँसम्म हेरिरहेको हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि केही तथ्य हुन्छ । यस अर्थमा दुइटै प्रश्नलाई एउटै बिन्दुमा राखेर हेरियो भने एउटा अर्को सङलो तस्बीर देखिन्छ । सवाल उठ्छ, यसरी जोडेर हेरिदिने काम गर्ने कसले ? राजनीतिजीवीले आ–आफ्नै चस्मा लगाएका छन् । तिनले प्रत्येक सवालमा दलीय लाभहानि हेर्छन् । मिडिया आफैंमा विभाजित छ । नागरिक समाज आफ्नै खुट्टामा उभिन सकिरहेको छैन । संविधान निर्माणको करिब तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा यस्ता विषयमाथि छलफल जरुरी छ । समाजमा रहेका फरक विचार तथा मान्यताबारे खुला छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु तथा फरक मान्यतालाई सम्मान गर्नसक्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।
संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमै लेखिएको छ, ‘हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ।’ ‘हामी नेपाली जनता’भित्र कुन नेपाली पर्छन् ? हामी नेपाली भनेर गर्व वा दाबी गरिराख्दा त्यसभित्र कुन भूगोलका बासिन्दा पर्छन् ? जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थुप्रै नेपालीका सन्तानले नागरिकता पाएनन् । तर त्यो लडाइँ मधेसीको मात्र हो भन्ने ठानियो ।
केन्द्रीय वर्चस्वको सत्ताले नागरिकको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकेन । राज्यमा सबैको अनुहार देखियोस् र शासनमा सहभागिता कायम होस् भने सङ्घीयता आवश्यक मानियो । प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेर पनि सङ्घीयता मधेसीको बलजफ्तीले आएको हो भनेर ठान्ने कम छैनन् । ‘हामी नेपाली’को बखान गर्दै नेपालको इतिहास जुन ढङ्गले पस्किइन्छ र जे कथ्य बताउने कोसिस गरिएको छ, त्यसभित्र मधेस कुन रूपमा छ ? के नेपाली पाठ्य–पुस्तकमा बताइएको छ, नेपालमा तराई कसरी गाभियो ? गाभिनु पूर्व तराईको सामाजिक–आर्थिक अवस्था के थियो ?
पञ्चायत कालमा राष्ट्रवादको संकथन अन्तर्गत जुन इतिहास लेखियो, त्यसभित्र मधेस छैन । इतिहासको गति चाल पाइयो भने जुन प्रकारको ‘राष्ट्र’ उठान गर्न खोजिएको थियो/छ, रहस्य खुल्छ । भन्नुको अर्थ ‘राष्ट्रिय’ भनेर विगतमा पस्किन खोजिएको कथ्यमा मधेसले जोड–घटाउ गर्दा शून्य हात लाग्छ भन्ने एक खालको बुझाइ कायम छ । यस्तो बुझाइमा आस्था राख्नेहरूले जहिले पनि काठमाडौंसँंग विलगावको कथ्य अगाडि सार्छन् ।
नेपालमा प्रतिरोधको राजनीतिका लागि मधेस सदैव उर्वर छ । राणा होस् वा पञ्चायत विरुद्धको सशस्त्र वा अहिंसक आन्दोलन, मधेस र मधेसीको हिस्सेदारी रहिआएको छ । चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक होस् वा वामपन्थी भनिएको राजनीति, आफ्नो रगत–पसिनाले मधेसले सिञ्चित गरेकै हो । अहिले संविधानलाई सबल र सार्थक बनाउन मधेसको कोणबाटै खबरदारी भइराखेको छ ।
लोकतन्त्र स्थापना, सङ्घीयता कार्यान्वयन, समावेशी राज्य संरचना, मातृभाषाको सम्मान, राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा जस्ता सवाल मधेसको कोणबाट उठ्दै गरे पनि आखिर यो सबैको प्रयोगमा आउने भएको छ । ‘देश’ एउटा यस्तो तत्त्व हो, जसले अनेक मतान्तरका बाबजुद साझा सरोकार उब्जाउँछ । नेपालको अस्तित्व, अस्मिता र आकारप्रति बहुसङ्ख्यक मधेसी गर्व गर्छन् । मधेसीहरूले राजनीतिमा पहाडीको प्रभुत्व र सांस्कृतिक तहमा पर्वते संस्कृतिको वर्चस्वको ठाउँमा नेपाली विविधताको इन्द्रेणी खोजेका छन् ।
मधेसीहरूले समतामूलक समाज निर्माण गर्न खोजेका हुन्, जहाँ नेपालका सबै बासिन्दालाई लागोस्, यो देश र राज्य मेरै हो । यही कारण हो, लोकतन्त्रलाई अझ बढी उन्नतशील र नेपाली नागरिकलाई सम्मानित बनाउन गरिने कुनै पनि प्रयत्नमा मधेसले आहुति दिँंदै आएको छ । देशप्रतिको सम्मान र समुन्नतिको चाहना नभएको भए मधेस यसरी हाँक लिएर इतिहासको विभिन्न मोडमा खडा हुँदैन्थ्यो ।
समस्या दुइटैतिर छ । अँध्यारो कोठाबाट संविधानको खेस्रा कोरिन थालिँदा मधेसले त्यसमा आफ्नो हित संरक्षित हुने नदेखेपछि असहमति प्रकट गर्‍यो । तर अर्कोथरीले त्यो असहमतिलाई ‘अपराधीकरण’का रूपमा अनुवाद गरिदियो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र विगतका आन्दोलनले आर्जेको सहमतिभन्दा फरक अवस्थिति संविधानमा पाउँदा मधेसले सदन, सडक र सीमामा असन्तुष्टि पोख्यो ।
त्यसलाई ‘राष्ट्र विरोधी’ गतिविधि हो भनेर फ्रेमिङ गर्ने कम भएनन् । मधेसले संविधानभित्रको सामथ्र्यलाई ओझेल पारेर मात्र हेर्नु वा मधेसमा रहेको संविधानप्रतिको संशयमा आँखा चिम्लिनु समानान्तर रेखामा हिँंड्नु हो । यो कहीं गएर मिल्दैन । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र जनसांख्यिक बनोटले यी दुई समानान्तर रेखाबीच मिलनबिन्दु खोजेको छ ।
मधेसी हितका सवालमा मूलधारबाट आफूलाई जहिले पनि अलग–थलग पारेर सोचिराख्यो भने यसले केन्द्रबाट टाढा पुर्‍याउँछ । परिस्थिति हातबाट फुस्किएको चङ्गाजस्तो पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी जहाँ यो सोचिन्छ, मधेसीहरू आन्दोलनमा पराजित भए, दिल्ली तिनका लागि देब्रे भए र बाध्य भएर निर्वाचनमा भाग लिए । भन्नैपर्ने हुन्छ, त्यस्तो चिन्तन आफ्नै देशका नागरिकको अवमूल्यन हो । यी दुइटै खाले सोचाइले दुई परस्पर अतिवाद जन्माउँछन् ।
एउटा दृष्टिले काठमाडौंसंँग सहकार्य गर्नुलाई समर्पण ठान्छ भने अर्को दृष्टिले सङ्घीयतालाई जुनसुकै सर्तमा अफाप सिद्ध गर्न चाहन्छ । मधेसले काठमाडौंसंँग भिन्न अस्तित्व देखाउने मनोविज्ञानमा पृथक राजनीतिक दृष्टि राख्न थाल्यो भने नागरिक राजनीति कमजोर बन्छ । गणतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयता र संसदीय प्रणालीजस्ता आधारशिलाबाटै मधेसले सार्थक सङ्घीयता र समावेशी राज्य संरचना निर्माण गर्ने तागत पाउन सक्छ ।
मधेस आफैंभित्र गुम्सिएको, उकुस–मुकुस भइराखेको र बाँकीका अस्तित्वप्रति कुनै चिन्ता र चासो नराखेको भन्ने छवि निर्माण आफैंमा आत्मघाती पाइला हो । मधेसबारे त्रुटिपूर्ण संकथन निर्माण गरिँंदा अर्काथरी यथास्थितिवादीले कतै मलजल त पाइराखेको छैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । मधेसका सुदूर देहातसम्म सूचनाको विस्फोट भएको छ । उसले पलपलको खबर पाइराखेको छ ।
गाउँघरका बैठकीहरूमा गएर सुन्नुस्, त्यहाँ कसको योग्यता, प्रमाणपत्र मिलेन, कुन संस्थाले कतिको ठेक्का पायो, इन्काउन्टरको भित्री रहस्य के छ, अख्तियार कसरी बेलगाम भएको थियो जस्ता विषयमा गन्थन हुन्छन् । सुदूर पहाडमा पनि यस्तै भइरहेको होला । तर काठमाडौंमा हुने जुर्मुराहट बढी चर्चामा आउँछ । काठमाडांैले लिने चासोमा पहाड र हिमालको संलग्नता हेर्छौं र मधेस त्यहाँ छैन भनी बुझ्छौं ।
मधेसमा यस्ता बुझनेहरू कम छैनन्, ‘जो देशको हितमा छैन, त्यो मधेसको हितमा छैन, जो मधेसको हितमा छ, त्यो देशको हितमा छ ।’ भन्न खोजेको के हो भने मधेसको देशप्रतिको चिन्ता अन्य भूगोलभन्दा कम छैन । यसको परीक्षा इतिहासले निकट भविष्यमा लिने अवस्था आयो भने मधेस फेरि सर्वोत्कृष्ट हुनेछ । मधेस भित्रको यही अन्तरप्रवाह हो, जसले तमाम आँधी–हुरीमाझ पनि नेपाल देशको अस्तित्वको दीयो बलिरहन्छ । प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०८:०८
२१ औं शताब्दीको बीच पछिका दशकमा मेरी छोरी वयस्क भइसकेकी हुन्छे । उसले विश्व स्तरका अनेक प्रकोप भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रावण ३१, २०७५ राेय स्कार्न्टाेन
काठमाडौँ — मेरी छोरी जन्मिँदा म दुईपटक रोएँ । सुरुमा खुसीले– २७ घन्टाको पीडादायी व्यथापछि हामीले बनाएको सानो प्रकृतिको पहिलो रुवाइ सुनेर मेरा आँखा रसाए । पछि दु:खले– यस पृथ्वीको नयाँ प्राणीलाई च्यापेर अस्पतालको झ्याल बाहिर हेर्दा पार्किङ लटमा राखिएका कारहरू, सडक पारिको मल, अल्कत्रे सडक, ढल र नाली, फोहोर फाल्ने ठाउँ जहाँ कुनै बेला कटुसको घारी हुन्थ्यो, त्यो देखेर दोस्रोपटक रोएँ ।
तस्बिर स्रोत : ड्यामन विन्टर/द न्यूयोर्क टाइम्स
विलुप्त हुनलागेको, प्रकोपले घेरिएको विश्व ! त्यो विश्व जसको प्रकृतिसँगको मधुर सम्बन्ध धेरै अघि नै टुटिसकेको छ । मेरी जीवनसाथी र मैले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि हाम्री छोरीको भाग्यमा दु:ख र पीडाले भरिपूर्ण यो ग्रहको बास लेखिदियौं । यो पीडाबाट उसलाई जोगाउने कुनै उपाय मैले देखिरहेको छैन ।
जलवायु परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूलाई थाहा होला– भविष्य कति कठोर हुनेछ । यो युगका मानिसहरूले भोगिरहेको चुनौती मानव इतिहासकै ठूलो हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । र अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई नियाल्नेहरूलाई थाहै होला, यो अवस्थामा सुधार आउने कुनै छाँट छैन । झनै बिग्रने अवस्था छ, बरु ।
जलवायू परिवर्तनलाई रोक्न अबको ५ देखि १० वर्षभित्र कार्बन ग्यास उत्सर्जन पूर्णरूपमा बन्द गर्न हामीले हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक र सामाजिक उत्पादनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यो धेरै आर्थिक भार पर्ने भएकोले अकल्पनीय काम हो । यसो गर्न विश्व स्तरमै आर्थिक क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीकृत व्यवस्था चाहिन्छ । कार्बन उत्सर्जन कम गर्नकै लागि राज्यले यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।
यो यति ठूलो हुन्छ कि विश्वले अहिलेसम्म यस प्रकारको लगानी नै देखेको छैन । तर अहिलेकै अवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा राजनीतिक र अर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेका पुँजीवादी देशहरूको समूहमै फाटो आउन थालेको छ । त्यसैले पनि एक विश्व नीतिमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरा आफैंमा अकल्पनीय हुन्छ ।
कदाचित विश्वका शीर्षस्थ नेताहरू मिलेर कार्य गर्न तयार भए पनि अहिलेसम्म वायुमण्डलमा उत्सर्जन भइसकेको कार्बन डाई–अक्साइडले पृथ्वीलाई तताउन छोड्ने छैन । कार्बन डाई–अक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा बढ्न र त्यसको प्रभाव पृथ्वीमा देखिन केही समय लाग्छ । त्यो भनेको बिउ रोप्ने र बाली काट्ने बीचको समय भिन्नताजस्तै हो । हामी त्यही बीचको समयमा बाँचिरहेका छौं । मेरी छोरी पनि यसैमा जन्मिएकी हो ।
कुनै चमत्कार नहुने हो भने अबको २० वर्ष विश्वले अराजकता पूर्ण जलवायु परिवर्तनका शृङखला, नसोचिएको जैविक परिवर्तन र क्रूर बन्दै गइरहेको राजनीतिक र आर्थिक क्रियाकलाप र युद्ध भोग्नेछ । त्यसपछिको अवस्था झनै भयावह हुनेछ । २१ औं शताब्दीको बीचपछिका दशकमा मेरी छोरी वयस्क भइसकेकी हुन्छे । उसले अवश्य नै विश्व स्तरका ती प्रकोप भोग्नैपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले केही व्यक्तिहरू यो पृथ्वीमा अब बच्चा जन्माउनु नै गलत हो पनि भन्छन् । म्यागी एस्टोरले लेखेझैं अहिले केही मानिस जलवायु परिवर्तनकै कारण बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् । यो निकै चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो । जानेर वा नजानेर अमेरिकामा निकै कम भइरहेको जन्मदरमा यसको पनि योगदान छ ।
केही मानिस अहिले आफूले भोगिरहेको भन्दा पनि दयनीय अवस्था आफ्नो सन्ततिले भोग्नु पर्नेछ भन्ने विषय सोच्नै चाहँदैनन् । अरू भने कार्बनले भरिपूर्ण उपभोक्तामुखी समाजमा बस्छन् र आफ्नो नैतिकतासँग आफैं भिडेर बच्चा जन्माउनु भनेको स्वार्थी हुनु र वातावरण विनाश गर्नु हो भन्छन् ।
सन् २०१७ मा भूगोलवेत्ता सेथ वाइन्स र वातावरण वैज्ञानिक किम्बर्ली निकोलसले प्रकाशित गरेको ‘रिसर्च लेटर’मा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न हामी सबैलाई शाकाहारी खाना खान, हवाइयात्रा नगर्न, कार नचढ्न र बच्चाहरू थोरै जन्माउन सुझाइएको छ ।
उनीहरूका अनुसार शिक्षाले नै समाजमा परिवर्तन ल्याउने हुनेले यी सवाल स्कुलमै बच्चाहरूलाई सिकाउन जरुरी छ । सरसर्ती हेर्दा यी उपाय ठिक हुन् जस्तो पनि लाग्छ । तर जब स्कुलमा सिकाइएका कुराहरू बाहिर समाजभन्दा फरक हुन्छ, तब कक्षाकोठाको सिकाइले विरलै जित हासिल गर्न सक्छ ।
यस प्रस्तावनाको प्रमुख समस्या यसले सुझाएका उपायहरू कदापि होइनन् । शाकाहारी हुनु, गाडी नचढ्नु, आफूसँग भएका स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्नु अनुचित हुनै सक्दैन । फेरि उनीहरूले भनेको जस्तो व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तुहरूको प्रयोग कम गरेर सामाजिक व्यवस्थामै परिवर्तन गुर्नपर्छ भन्ने सुझावलाई भने कसैले मान्नेवाला छैनन् । हामी सक्दैनौं ।
समाज केवल लाखौं वा करोडौं मानिसको एकीकृत चाहनाले मात्रै चलेको होइन । यो जटिल र प्रक्रियागत रूपमा नै गतिशील हुन्छ । जहाँ चाहनाहरू संस्थागत बन्छन् र विचारहरू समय क्रमसँगै परिवर्तित हुन्छन् । यही चाहनाले संरचनाको विकास गर्छ, जसलाई हामी सफल ठान्छौं । यो सफल मानिएको संरचनालाई धेरै प्रकारका बाहिरी र भित्री शक्तिहरूले प्रहार गरिरहेका हुन्छन्, जसमा वातावरणीय, वस्तुगत र सामाजिक आविष्कार र समय–समयमा आइपर्ने विपत्ले प्रभाव पारेको हुन्छ । यसको अर्थ हामी जसरी भौतिकशास्त्रका नियमहरूभन्दा बाहिर रहेर बाँच्न सक्दैनौं, त्यसरी नै आफूले चाहेको हिसाबमा स्वतन्त्र भएर जीवन जिउन असक्षम छौं । हामी उपलब्ध विकल्पमध्ये उत्तम विकल्पलाई मात्र छान्न सक्छौं ।
वास्तवमै कसैले पनि बच्चा जन्माउनु जरुरी छैन । तर यो नै मानवीय गुणको सबैभन्दा चरम अभिलासा हो । यो सबै जनालाई एक सूत्रमा बाँध्ने सिद्धान्त हो, जुन मानव समाजलाई अगाडि बढाएर अर्थपूर्ण बनाइराख्न निकै आवश्यक छ । तसर्थ सन्तान उत्पादनले नै मानवीय संस्कृतिलाई सबै बाधाहरूका बीच पनि अगाडि बढाउन सक्छ ।
वाइन्स र निकोलसका सुझावहरू अवलम्बन गर्नु भनेको आफूलाई अहिलेको आधुनिक जीवनबाट छुट्याउनु हो । यसको अर्थ भविष्यसँग नाता तोडेर हामी नितान्त एक्लो हुनु हो । तसर्थ उनीहरूको तर्कलाई गम्भीर भएर सोच्दा विश्वमा भइरहेको मौसम परिवर्तनको नैतिक जिम्मेवारी लिएर आत्महत्या गर्नुपर्छ † आफ्नो कार्बन पदचापलाई कम गर्ने योभन्दा सहज उपाय पनि छैन । आफू नै नरहेपछि न बिजुलीको प्रयोग गरिन्छ, न कुनै मासु खाइन्छ, नत मट्टितेल नै बालिन्छ र कुनै बच्चा पनि जन्माइँदैन†त्यसैले यदि हामी साँच्चिकै ग्रहलाई जोगाउन चाहन्छौं भने मर्नु नै उचित हुन्छ ।
डेभिड बक्कलले पनि त्यस्तै गरे । एकाबिहानै आफ्नो ब्रुक्लिनस्थित अपार्टमेन्टबाट निस्किएर प्रोस्पेक्ट पार्क गए, र आफूलाई मट्टितेल खन्याएर आगो लगाए । उनी स्वस्थ्य थिए । उनको जीवनसाथी र छोरी पनि थिइन् । केहीले आत्महत्यालाई मानसिक आवस्थासँग जोड्छन् । तर उनले छोडेर गएको चिठ्ठी अनुसार त्यो कुनै मानसिक अवस्थाको कारण थिएन । उनको कदम राजनीतिक थियो ।
‘प्रदूषणले हाम्रो ग्रहलाई ध्वस्त पारेको छ । हावा, पानी, जमिन र मौसम प्रदूषित छन्,’ उनले लेखेक थिए, ‘अहिले यो पृथ्वीका सबै मानिसले पेट्रोलियम पदार्थ बालेर भएको प्रदूषित हावामा सास फेर्छन् र त्यसको नतिजा अल्पायुमै मर्छन् । मैले आगो लगाएर अल्पायुमै आफ्नो देह त्याग गर्नु पछाडिको धेय सबैलाई त्यही नै सम्झाउनु हो ।’
आत्महत्या गर्नु बक्कलको व्यक्तिगत रोजाइ हो । तर हामीजस्तो धेरैले त्यसलाई रोज्न सक्दैनौं ।
म आफ्नो यो जीवनप्रति कटिबद्ध छु । म बाँचिरहेको विश्वप्रति यसका मौजुदा मुर्खता र दु:खका बाबजुद कटिबद्ध छु । किनकि यो विश्वमा ममात्रै नभएर अन्य धेरैजना बस्छन्– मेरा सहकर्मी र विद्यार्थी, मेरा साथीहरू र तिनका परिवार, मेरी जीवनासाथी र छोरी ।
यो विश्वमा रहँदामात्रै मेरा चाहनाहरूको अर्थ रहन्छ । र यो विश्व जेजस्तो छ, त्यसले हामीलाई आफ्नै तरिकाले खुसी पनि त दिन्छ ।
जब मेरी छोरीको जन्म भयो, तब मैले यसअघि कहिल्यै महसुस नगरेको प्रेम र लगाव महसुस गरेंँ । साथै भयानक प्रकारको सहनशीलता । म उसका लागि मर्न र मार्न सक्छु । उसको लागि जस्तोसुकै बलिदान पनि दिन सक्छु । यो भावना ऊ जन्मिएको सुरुका दिनमा धेरै कठोर रूपमा थियो । अहिले त्यसको कठोरता कम भए पनि भावना भने मरेको छैन । तर जब म उसले भविष्यमा जिउनुपर्ने विश्वका बारेमा सोच्छु, रिस र पीडाले मेरो मन भरिन्छ ।
हरेक नयाँ दिनले भिन्न प्रकारको दु:ख लिएर आउँछ । मेरो नवजात छोरीको आँखाबाट हेर्दा यो विश्वका सबै कुरा नवीन लाग्छ । यद्यपि हरेक नयाँ खोजमा मृत्युको भय रहन्छ । उसका लागि काल्पनिक कथाका किताब पढ्दा त्यहाँ उल्लेख भएका जनावरहरूको नामले मलाई ग्लानि महसुस गराउँछ । उसले सायद देख्नै पनि नपाउने जनावरका नाम म उसको खाली दिमागमा भर्दै गइरहेको छु जस्तो लाग्छ । कहिले उसलाई बाहिरको दुनियाँमा के भइरहेको छ भनेर बताउने ? जहिले बताए पनि त्यो ढिला नै हुन्छ ।
हाम्रा सन्तानसँग हामीसँग भएजति विकल्प पनि हुने छैनन् । हामीसँग अहिले केही गर्नका लागि भएका अवसरहरू उनीहरूले प्राप्त गर्ने छैनन् । हाम्रो निर्णयहरूले संकुचित बनाइसकेको अवसरमा उनीहरूले आफूलाई सीमित राख्नुपर्ने हुन्छ । बितिरहेको हरेक दिन र हरेक महिनाले यथोचित परिणामका आशालाई मारिरहेको छ । यसले मानवीयताको ढोका पनि बन्द गरिरहेको छ ।
केही हुनु र नहुनु बीचको समयलाई हेरेर सबै ठिक हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हो । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो नै एक प्रकारको प्रकोप हो, जसलाई हामीले देखिरहेका छैनौं वा देखेर पनि वास्ता गरिरहेका छैनौं । हाम्रो युगको यो सत्यलाई बेवास्ता गरेर बस्नु हाम्रो द्वैध चरित्र हो ।
हामीले अहिले सोच्नुपर्ने विषय भनेको हामी विमानमा उड्ने कि नउड्ने वा बच्चा जन्माउने कि नजन्माउनेभन्दा पनि अहिले भत्किएको विश्वमा उच्च नैतिकताका साथ कसरी बाँच्ने भन्ने हो । अहिलेको विश्वमा हामी मानवजाति सम्पूर्ण रूपमा प्रकृतिको दया र एक–अर्काप्रति आश्रित भएर बाँचिरहेका छौं । अहिलेलाई यो पृथ्वीभन्दा बाहिर न कुनै अर्को बस्नलायकको ग्रह छ, न हामी भाग्न सक्ने अवस्थामै छौं । हामी सबै यहाँ अड्किएका छौं ।
उच्च नैतिकतासँग बाँच्नु भनेको आफ्नो कार्यले सिर्जना गर्ने समस्यालाई विचार गर्दै त्यसको जिम्मेवारी स्वयंले लिनु हो । हाम्रो क्रियाकलापले हामीलाई मात्र नभई अरूलाई पनि असर गर्नेमा कुनै दुईमत राख्नु हुँदैन । आफ्ना इच्छाहरूलाई संकुचित गरेर प्रकृतिमा रहेका अन्य वस्तुका साथै एक–अर्काप्रतिको आन्तरिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्नु पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्नु हो ।
यो ग्रहमा हुनु भनेको जीवनले हामीलाई दिएको एउटा ठूलो उपहार हो, जुन कुनै पनि बेला खोसिन सक्छ । म मेरी छोरीलाई भविष्यबाट त जोगाउन सक्दिन र उसलाई योभन्दा राम्रो जीवनका लागि वाचा गर्न पनि सक्दिन । म त उसलाई केवल कसरी अरूको सम्मान गर्ने, अरूमाथि दयाभाव राख्ने र कुन तवरले प्रकृतिको दयामा बाँच्ने भनेर सिकाउन सक्छु । भविष्यमा बाँच्नका लागि गर्नुपर्ने संघर्षका लागि म उसलाई तयार पार्न सक्छु । यति गर्दागर्दै सत्यका लागि लड्न पनि सिकाउन सक्छु । किनकि सत्यको लडाइँमा हामी कहिल्यै एक्लो हुँदैनौं ।
मैले उसलाई पृथ्वीका सबै वस्तु नश्वर छन्, ऊ अनि म र उसकी आमा अनि हामीले जानेको विश्व नै पनि एक दिन मर्छन् भनेर सिकाउनु पर्नेछ । यही सत्यलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु नै विवेकपूर्ण कार्य हो ।
(रोय स्कार्न्टाेन नर्टेडम विश्वविद्यालयका अंग्रेजी भाषाका प्राध्यापक हुन् । यो निबन्ध उनको नयाँ किताब ‘वी आर डुम्ड : नाउ ह्वाट ? एस्सेज अन वार एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’बाट लिइएको हो ।)
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०८:०६